AMADODA AMA-25 AMANWELE OMTSHATO ABALASELEYO AWAKHE SAWABONA - IFASHONI
Eyona Ifashoni Iinqwelo ezingama-25 ezilungileyo zoMtshato Kuzo zonke iindidi zomyeni
Iinqwelo ezingama-25 ezilungileyo zoMtshato Kuzo zonke iindidi zomyeni
Ukusuka ekuphelelweni lixesha ukuya kutrend, jonga usuku lwethu oluthandayo 'lweedos. MONISA J. Iifoto, UMARIA AZCONA UMFANEKISO, ANGELA SUE IFOTO
Ukuhlaziywa ngo-Epreli 30, 2021
Ngomhla wakho womtshato, uya kujikelezwa ngabahlobo kunye nosapho (kwaye uya kuba ukuthatha imifanekiso emininzi ). Kanjalo ufuna ukubonakala kwaye uzive umhle -Ngakumbi xa kuziwa kwizinwele zakho. Ukunceda, siqokelele iinwele zomtshato wamadoda angama-25 kuzo zonke iintlobo zomyeni. Nokuba ufuna into ecocekileyo kunye nokusikwa okusondeleyo okanye enye into ebuyiselweyo, sinenwele esaziyo ukuba uya kuyithanda. Kwaye siqokelele iingcebiso malunga nendlela yokukhetha iinwele zomtshato zamadoda ngexesha losuku olukhulu.
Izinwele yenye yeendlela ezonwabisayo zokuzibonakalisa, ke zive ukhululekile ukuba uyile. Nokuba yeyiphi na indlela ogqiba ngayo, qiniseka ukuba ikwenza uzive uzithembile. Sebenza nomgcini weenwele zakho zomtshato, umchebi weenwele okanye umcoci oza kuza nosuku olugqibeleleyo lokwenza. Qiniseka nje ukuba ulungiselela ngokufanelekileyo: setha ii-trim eziqhelekileyo ezikhokelela kumhla omkhulu kwaye unamathele kwinkqubo yakho yokhathalelo lweenwele. Ukulungele ukuqalisa? Bona ezinye zeenwele zethu zomtshato esizithandayo, ngezantsi.
Ungayikhetha njani iNwele yomtshato yamadoda
Xa kuziwa ekuthatheni isigqibo ngemini-yakho 'yokwenza, kukho izinto ezininzi ekufuneka uzithathele ingqalelo. Eyokuqala (kwaye ebaluleke kakhulu) yintuthuzelo. Zeziphi iintlobo zezimbo ezikwenza uzive uzithembile? Yiya kwimifanekiso yakho kwaye ugcine ezo uzithandayo. Emva koko, zibuze into oyithandayo malunga neenwele zakho. Ngaba ubude, ukuthungwa, okanye isitayile esahlukileyo? Nje ukuba uthathe isigqibo malunga nento oyithandayo malunga nezitayile, emva koko unokusebenza kunye nomlungisi weenwele zakho, umchebi weenwele okanye isihombisi ukuzisa umbono wakho ebomini.
Umama unyana iingoma zokuqala zomdaniso
Ukuba unethemba lokutshintsha izinto phezulu, unokujonga izinto ezinje ngobume bentloko (ezinye izitayile zijongeka ngcono kubuso obujikelezileyo xa kuthelekiswa nobuso obude). Fumana umnxeba wevidiyo okanye ucwangcise ixesha lokuqeshwa kunye nenwele yakho ukuze ufumane uluvo lwabo lobuchwephesha. Banokukunika iindlela ezimbalwa onokukhetha kuzo phakathi kwakho.
Okokugqibela, hlala ukhumbula ukuba awufuni kukhathazeka ngeenwele zakho kanye ngaphambi komtshato okanye ngosuku lwakho lomtshato. Sukwenza nantoni na enzima (njengombala omtsha kraca okanye utshintsho olukhulu kwisitayile) kanye phambi komsitho. Awufuni ukongeza naluphi na uxinzelelo olungafunekiyo kumhla wakho!
Abona Bathandwa Bethu Bokutshata Kwamadoda
Jonga i-25 yeenwele zethu zomtshato esizithandayo, ngezantsi.
MONISA J. UMFANEKISO
Bonisa ubude bakho ngenkangeleko ebuyisiweyo. Hlanganisa iinwele zakho kwi-ponytail ephantsi, evulekileyo kwaye ukhuseleke nge-elastic.
Indlela emfutshane yePompadour Hairstyle
Hlaziya kwakhona uBenen Photography
Izinwele zeenwele zamadoda zasePompadour ziyathandwa kuba zikhangeleka ngathi zezakudala nezala maxesha. Isitayile side ngaphezulu kunye nenxalenye encinci yecala kwaye siyehla siye ezantsi kufutshane, ukusika okusondeleyo.
Indlela ende yePompadour
UJESSICA RIEKE UMFANEKISO
Ubude obuncinci ngaphezulu bunokunika isitayile se-pompadour ngakumbi nangakumbi.
ICORISS WATSON PHOTOGRAPHY LLC
Sebenza nomchebi onamava ukukhupha le nwele iphucukileyo. Buza i-crisp, imiphetho ecocekileyo kunye nokuphela okungacacanga kufutshane neetempile zakho.
UJENNY DEMARCO UMFANEKISO
Ngaba ujonge into ecocekileyo kunye neklasikhi? Yenza icandelo lecala kwaye ulitshayele ngaphezulu. Kukucheba iinwele zomtshato wamadoda okujonga kancinci.
Yenza ukuphela okukhulu, kodwa shiya ii-curls zakho ubude obufanayo phezulu. Zigcine ziqinisiwe ngokuqinileyo ebusweni bakho ukuze zibonakale zicocekile, zicocekile.
Umkhaba ubuyela umva ANGELA SUE IFOTO
Ukutsalela umnxeba onke amagumbi okuya phambili kwefashoni: iinwele ezingapheliyo zezakho. Yenza ukuphela okuphawulekayo emacaleni entloko yakho kwaye ushiye ubude obude. Emva koko, sebenzisa ijeli yeenwele ukuphinda ubuye.
Ngaphantsi UMARIA AZCONA UMFANEKISO
Ukwenza i-edgy, kwi-trend look, shiya iinwele zakho ezinde ngaphezulu kwaye wenze i-buzz esondeleyo emacaleni entloko yakho. Uhlobo oluphezulu nangona ufuna: phezulu, utyibilikise umva okanye ecaleni.
I-Buzz elawulwayo UMFOTO WAKHALA
Ukunqunyulwa kwe-buzz kuhlambulukile, kupholile kwaye kukudala. Buza wena stylist malunga nokucheba kwamadoda ukuba utshatile ukuba awufuni kujongwa.
Isitayile seIvy League
Ibali lakho leFoto + iCinema
Ukujongwa ngokusesikweni, khuthazwa ziintsuku zakudala zee-sock hops kunye ne-drive-ins. Isimbo se-Ivy League sasinenxalenye eyahlukileyo enamacala abuyileyo nasemva kokuhamba kancinci.
Uvuyo Ellie Photography
Ukusikwa kwetaper yenye yezona ndlela zicelwayo kuba kujongeka kulungelelanisiwe kwaye kucocekile- kwaye akukho ngxabano.
Sika iTaper Taper
Ukuba uyayithanda imbonakalo ye-tapered kodwa ufuna enye into ebekelwe umva, zama le nwele. I-classical kwaye ibuyiselwe umva: eyona ilungileyo kuzo zombini ihlabathi.
Ukujija okuphezulu okuPhezulu okuphezulu ngeNtshebe epheleleyo
URebekah J. Murray Ukufota
Kude phezulu kunye nokuphela ngasemva nasemacaleni, oku kunqunyulwa kunokuxhasa iindlela ezininzi zeendevu.
Amaza amafutshane agudileyo
I-LAVISHLY LUX STUDIO
Imigca ecocekileyo, ukuphela kwetempile okuncinci kunye namaza amafutshane enza iinwele zolondolozo ezisezantsi ezihlala zijongeka njengeklasikhi.
I-Taper Hairstyle enentshebe epheleleyo
UJenna Marie Photography
Iinwele zeTaper zinde phezulu kwaye ziye zifutshane emacaleni, ngokufana nepompadour.
Amaza endalo anokusetyenzwa kwiinwele ezahlukeneyo ezahlukeneyo, ngakumbi ukuba kukho ubude obunokudlala kunye nokuncipha kwemveliso yeenwele ukuzilungelelanisa.
Ii curls zendalo IKAITLYN LUCKOW kunye ne-ALEXANDER KANASTAB
Bonisa iinwele zakho ezigobileyo ngosuku lwakho lomtshato. Yongeza i-curl enhancer kwaye usasaze ii-curls zakho kwii-ringlets ezichaziweyo eziza kukhanya ngomhla omkhulu.
Ubude bamaGxa ngaMahle kweNwele
Ifoto kaTamara Gruner
Iinwele ngaphezulu nje kwamagxa zibukeka zihamba kakuhle ngenxalenye ephakathi elula kunye nentshebe echetyiweyo.
Icandelo Elisezantsi USHELBY DANIELLE UMFANEKISO
Gcina izinto zilula kwaye hlula iinwele zakho kwelinye icala. Yongeza ukhilimu wokubamba, kwaye ulungile ukuhamba.
Indlela emfutshane ye-Afro Hairstyle yeeNwele eziGobileyo
Asinakufumana okwaneleyo kule retro yeenwele. Isitayile esifutshane se-afro sikumgangatho ogqibeleleyo.
I-Undercut Man Bun Hairstyle
UTATA KANYE NAMAFOTO AMABINI
Ngaba uneenwele ezinde? Cinga ukugungqa i-bun man nge-subcut undercut. Le iinwele ezihamba ngokulinganayo ziyabekwa mva kwaye zi-edgy.
Indlela emfutshane yeNdalo yeenwele eziQhelekileyo
Dlala ubume beenwele zendalo ngokuthambisa imveliso ukuze ufumane ii-curls kubuninzi bazo.
UJennifer Miller Photography
Ukucheba okusondeleyo kugcwalisa iinwele zobuso ezilungiswe kakuhle.
ITHERRI BASKIN PHOTOGRAPHY
Okanye, yiya entlokweni echebe ngokupheleleyo. I-Psst: Uninzi lwee-celebs ezinje ngoKaramo Brown kunye noDwyane 'Iliwa' uJohnson uyigungqisile le nkangeleko.
Ukuphela okuphezulu kweRetro
Kumntu othanda ulonwabo othanda ukuba ngamalungu alinganayo kunye nesitayile, khuthazwa ziinwele ezijikijelwayo.
Umama omnyama womtshakazi unxiba
Eyona ndawo yokuthenga iithoyi zesini kwi-intanethi
iikowuti zothando ngentombi yakho
sisiphi isandla somtshato